Shaqaalaha shirkadda Google oo dibad bax sameynaya - Halbeeg News
Shaqaalaha shirkadda Google oo dibad bax sameynaya
Dibad baxan taariikhiga ah ayaa muujinaya awoodda ay leeyihiin shaqaalaha u shaqeeya shirkadaha Tiknoolajiyada.
Bishii la soo dhaafay oo kaliya in ka badan 20,000 oo shaqaalaha joogtada ah ee shirkadda Google ayaa faarujiyay in ka badan 50 xafiis oo ay Shirkadda Google ku leedshay daafaha caalamka iyaga oo ka cabanaya gabood fallo la xiriira arrimaha galmada iyo dhaqan xumo kale.
Meel u dhow xarunta caalamiga ah ee Shirkadda Google ee ku taalla Mountain View, California weliba banaanka dhismaha ku dhagan xarunta Google ayaa waxaa isugu soo baxay 4,000 oo shaqaale ah, waa ay buuqayeen waxa ayna ku dhawaaqayeen “Waqtigii dhamaa, istaaga oo dib u dagaalama”.
Maamulaha guud ee shirkadda Google Sundar Pichai ayaa ka maqnaa xafiiskiisa xiligii ay shaqaalaha dibad baxa sameynayeen balse waa uu maqlay in ay shaqaalahii dibad bax sameeyeen waxuuna dhageystayaasha u sheegay “dhacdooyinkan oo kale marka ay dhacaan waxay muujinayaan in anagu aanan mar walba isku si sax u ahayn”.
Waa arrin aan looga baran suuqa shirkadaha Tiknoolajiyada iyadoo aan la ogoleyn in ay shaqaaluhu ka bannaan baxan madaxooda shaqada.
Dibad baxan ayaa si guul ah ku soo dhamaaday iyada madaxda iyo dibadbaxayaashu ay isku raaceen in ay jiraan baahiyaha qaar ee ay shaqaaluhu ka cabanayaan.
“Tani waa dhacdo ballaaran” ayuu yiri Paul Saffo oo sii raaciyay “Maaha arrin Sahal ku dami doonta, wax walba oo dhaca waxa ay heli doontaa dad aad u farabadan”.
Mar walba waxaa dhaca khilaaf u dhexeeyay Maamulka shirkadda iyo shaqaalaha shirkadda balse shirkadda ayaa isku dayda in ay caburiso ka hor inta aanay cabashadu bannaanka usoo bixin.
Dowladda federaalka ah oo Sucuudiga kula heshiisay in la kordhiyo tirada Xujeyda, lana hagaajiyo duruufahooda
Madaxweyne Farmaajo oo maxkamadda sare u magacaabay Garsooreyaal cusub